Komity Olimpika Malagasy (KOM): voafidy ho filoha indray Randrianasoloniaiko Siteny | NewsMada
Komity Olimpika Malagasy (KOM): voafidy ho filoha indray Randrianasoloniaiko Siteny
Tontosa, omaly, talata 23 janoary, taty Toliara, ny fifidianana ireo mpikambana eo anivon’ny Komity olympika malagasy, hitantana mandritra ny 4 taona manaraka. Nolaniana tamin’ny alalan’ny tsangan- tanana, nandritra izany, ny kandida tokana, Randrianasoloniaiko Siteny.
Nizotra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny ny fifidianana teo anivon’ny Komity Olimpika Malagasy (KOM). Federasiona miisa 24 amin’ny 29 no tonga nandritra izany, dia ny taranja voile, aviron, Canoe, Tir à l’arc, gymnastique, badminton, boxe, volley ball, hand ball, basket ball, fibatana fonjamby, bisikileta, judo, karate, tenisy ambony latabatra, tenisy, rugby, escrime, bodybuilding, mushu, pentathlon, taekwondo ary ny atletisma. Voafidy tamin’ny tsangan- tanana, ho filohan’ny KOM, araka izany, Randrianasoloniaiko Siteny. Mpikambana miisa 8 mianadahy no manampy azy ao anatin’ny fitantanana izay nolaniana tamin’ny alalan’ny tsangan-tanana ihany koa. Nanaraka ny voarakitra rehetra ao anatin’ny sata mifehy ny Kom ity fifidianana ity, raha ny nambaran’ny komity mpikarakara ka tsy nisy ny olana.
Naneho ny fahavitrihana hitantana mandritra ny 4 taona indray ny Kom, ny filoha Siteny. Nanambara ity farany fa efa voadinika mialoha ireo vina mila tanterahina. Vaindohan-draharaha, hoy izy, ny fanomanana ny lalaon’ny nosy sy ny lalao olympika any Tokyo. Tsy maintsy atao ny hahazoan’ny atleta malagasy vokatra tsara, hoy hatrany ny fanazavany. Anisan’ny nasian-dRandrianasoloniaiko resaka manokana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fitondram-panjakana. “Tsy nisy ny fampivondronana niarahana niasa tamin’ny fitondram-panjakana hatramin’izay. Tsy tokony ho gaga, araka izany, raha tsy dia nahafa-po loatra ny vokatra ho an’ireo atleta malagasy”, hoy ny nambaran’ny filohan’ny KOM, Siteny. “Olona manana fo, mahatsapa sy ontsa amin’ny fahararian’ny atleta malagasy no tokony ho Minisitra hitantana ny fanatanjahantena malagasy. Vonona ny hifanolo-tanana amin’ny komity olympika malagasy. Inoana sy antenaina ihany koa fa vitan’ny filoham-pirenena ny hanampy sy hanatratra ny tanjona napetrany ao anatin’ny vina mahakasika ny fampandrosoana ny fanatanjahantena malagasy.Tsy afa-misaraka amin’ny fitantanana ny spaoro ny “movement sportif ”, nanamafy hatrany Randrianasoloniaiko Siteny.
-Randrianasoloniaiko Siteny, filoha ny Kom:
“Tsy hay ny tsy hisaotra ny federasiona rehetra mbola nanome fitokisana indray ny tenako hitantana ny taom-piasana “mandat” fahatelo ny komity olympika Malagasy (Kom). Ilaina ny fiaraha-miasan’ny Kom sy ny Minisitera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fitondram-panjakana. Fandresena lehibe ho an’ny atleta malagasy sy ny tontolon’ny fanatanjahantena rehetra mihitsy io fiaraha-miasa amin’ny fitondram-panjakana io. Hisy fiantraikany amin’ny vokatra ho azon’ny mpanao fanatanjahantena malagasy ny fahatanterahan’izany. Inoaka fa ny fitondrana vaovao sy izay ho minisitra ho avy eo dia hifanome tanana, amin’ny federasiona rehetra hahafahana mahatratra ny tanjona kinendry.
-Rakotomalala Marcel, filohan’ny Ceni :
“Nizotra ara-dalana ny fifidianana ny mpitantana eo anivon’ny komity olympika malagasy. Miarahaba an’Andriamatoa Randrianasoloniaiko Siteny izay voafidy hitantana izany indray, mandritra ny efa-taona, manaraka. Eo ihany ireo ekipa rehetra mandrafitra ny Kom hiara-kiasa amin’ny filoha mpitantana. Anisan’ny nahafinaritra ny nahita ny firaisan-kinan’ireo federasiona tonga nandray anjara tamin’ity fivoriambe sy fifidianana, notontosaina teto Toliara ity.”
-Ramanantsoa Gabriel, filohan’ny FM Lomano :
“Antenaina fa hitondra vokatsoa ho an’ny taranja rehetra mivondrona eo anivon’ny KOM izao fahavitan’ny fifidianana izay hitantana indray, mandritra ny efa-taona. Ho an’ny taranja lomano manokana, fotodrafitrasa ho an’ny mpilomano malagasy eto Antananarivo sy manerana an’i Madagasikara no laharam-pahamehana ilaina fanampiana amin’izao. Ity fangatahana ity izay efa tao anatin’ny vinan’ny filoham-pirenena ihany koa ka hinoana ny hisian’ny fiaraha-miasa bebe kokoa eo amin’ny KOM sy ny fitondram-panjakana”.
-Andriamandimbisoa Jocelyn, filohan’ny FM Volley-ball :
“Raiamandrenin’ny federasiona ny komity olympika Malagasy ka ankasitrahana ny fahatanterahan’ny fifidiananana, notontosaina teto Toliara ity. Miarahaba an’Andriamatoa Randrianasoloniaiko Siteny ny eo anivon’ny federasiona malagasy Volley ball ary manantena ny hisian’ny fiaraha-miasa ho fampandrosoana ny fanatanjahantena malagasy”.
Nangonin’i Mi.Raz (Iraka manokana Toliara)